Aung's Investment: First thing first, What are you?
First thing first, What are you?
ဘာInvestmentမှ မလုပ်ခင် ဦးဆုံးစဉ်းစားရမှာက ကိုယ့်ရဲ့ Investment Objectiveပါ။ ဒီ Objective ပေါ်မူတည်ပြီး Investment Strategy တွေကွာသွားပါလိမ့်မယ်။ အောက်မှာ တိုတိုနဲ့လိုရင်းပဲ ခွဲခြားပေးထားပါတယ်။
ဘာ Investmentမှမလို။ ပျော်ပျော်သုံးရုံပဲ။ Credit Card များလေ၊ ကောင်းလေ။
ဘဏ်ကပေးတဲ့ Risk free Interest rateနဲ့ပျော်တယ်ဆိုရင် Saver ဘဝက စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လတ်တလောနဲ့ ရေရှည်Inflationနဲ့ Taxကိုတော့ ထည့်စဉ်းစားဖို့လိုမယ်။
ရှိတဲ့ငွေကို ဘဏ်မှာတစ်ပိုင်း၊ Stock Marketမှာတစ်ပိုင်း၊ Real Estateမှာ တစ်ပိုင်း စသဖြင့် ထည့်ထားနိုင်တဲ့သူတွေပါ။ Gold နဲ့ Foreign Currencyလည်း ပါနိုင်ပါတယ်။ Investor အများစုဟာ Part-time များပါတယ်။ Buy-and-Holdလို့လည်း ခေါ်တယ်။ အနည်းဆုံး ခြောက်လတော့ ကိုင်ထားတတ်တယ်။ Investorအများစုဟာ Short-term/Temporary အရှုံးဒဏ် ခံနိုင်ရှည်ရှိကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ ရေရှည်မှာ Return on Investment (ROI) ဟာ ဘဏ်တိုးထက်တော့ သာမယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။ Part-time Investorအများစုဟာ Day Job ရှိကြပါတယ်။ Financial Advisors တွေနဲ့ တိုင်ပင်တတ်ပြီး Finance Newsletterတွေ Subscribe လုပ်တတ်ပါတယ်။
ဒီအုပ်စုမှာ Day Job မရှိပါဘူး။ သူတို့ဟာ ROI နဲ့ပဲ အသက်မွေးကြပါတယ်။ Long-term Investment တွေရှိတတ်ပေမယ့် Short-termနဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင် ရာခိုင်နှုန်းနည်းပါတယ်။ သူတို့ဟာ ရေတို Price Fluctuationပေါ်မှာ Advantageယူတတ်ကြပါတယ်။ ROIကို နည်နည်း ထိပါးလာတာနဲ့ Liquidateလုပ်တတ်တယ်။ လတ်တလော Economic Dataတွေပေါ်မူတည်ပြီး Investment Stragegyတွေကို မြန်မြန်သွက်သွက် ပြောင်းနိုင်ကြပါတယ်။ Riskကို ကောင်းကောင်းManageမလုပ်တတ်ရင် မွဲသွားနိုင်သလို၊ နိုင်နင်းရင်တော့ Financial Freedomရနိုင်ပါတယ်။ အသက်ငယ်တုန်း Retirement ယူနိုင်မယ့် သူတွေပါ။
တကယ်လို့ Spender သို့မဟုတ် Saverဆိုရင်တော့ နောက်နေ့ ဒီBlogကို လာစရာမလိုတော့ပါဘူး။ Investing/Tradingကို စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ Investment Objectiveကို Define လုပ်ကြည့်ပါ။ ကိုယ်ဟာ တကယ်တမ်းတော့ လုံးဝ Riskမယူရဲတဲ့ Typeဆိုရင် Investingနဲ့ ဝေးဝေးနေတာ ပိုကောင်းပါတယ်။
ဒီBlogမှာ Investmentနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ methodology, psychology နဲ့ general knowledgeတွေ ပါပါမယ်။ Footer မှာရေးထားတဲ့ Disclaimer လေးလည်း ဖတ်သွားပါဦး။
Posted by Aung Myo Htet at 10/01/2009 04:07:00 PM
Labels: disclaimer, investor types
King of Blogger October 08, 2009 3:20 PM
Part-time/Passive Investor ကို စိတ်ဝင်စားပါတယ်...ထပ်ေ၇းပါအုံး..ကျေးဇူး
NGUUNN October 08, 2009 4:04 PM
Thanks for your post. ကျေးဇူးအထူးပါဗျာ။
မမိုး October 09, 2009 6:38 PM
ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်။ သိပ်အဖိုးတန်တဲ့ ပိုစ့်တွေပါ။ အရင်ကမသိခဲ့လို့ မဖတ်ခဲ့မိဘူး။ အခုမှ
ဟိုဝင်ဒီဝင်နဲ့ တွေ့လို့ဖတ်ရတာ။ နောင်ကိုလဲ အမြဲလာဖတ်ပါမယ်။
AMK January 31, 2010 11:59 AM
ခုမှ စဖတ်တာပါ စိတ်ဝင်စားပါတယ် ကျေးဇူးပါဗျာ